कानुन उल्घंन गर्नेलाई कारवाही हुन्छ – एसपी दानसिंह बोहरा – KalaiyaLive.Com.Np
वीरगन्जकोे आर्दशनगरमा रहेकोे ओम साइ ड्रीकिङ उधोगमा भिषण आगलागी
कलैया 21	℃
कानुन उल्घंन गर्नेलाई कारवाही हुन्छ – एसपी दानसिंह बोहरा
कलैयालाईभ April 4, 2012
नेपाल प्रहरीको सेवामा प्रबेश गर्नु अघि सम्म आफ्नै सुदुरपश्चिमको जिल्ला दार्चुलाको गाउँमा सहयोगी शिक्षकको रुपमा कार्यरत दानसिंह बोहरा प्रहरी निरिक्षकको रुपमा २०४६ सालमा प्रहरी सेवामा प्रबेश गनुभयो । एमपिए सम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभएका बोहरा अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा कलैयामा प्रहरी उपरिक्षक ( एस पी ) को रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । राम्रो काम गरेवापत वेस्ट प्रहरी औफिसरको रुपमा सम्मानित एसपी बोहरा कामकै शिलशिलामा चिन, अमेरीका, सुडान, रुस लगायत बिभिन्न २५ भन्दा बढी देशमा सेवा एवं भ्रमण तथा अनुभव गर्नुभएको छ । बारा जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको बिषयमा केन्द्रीत भई कलैयालाईभ.कामका अरुणकुमार साह र सुभाषप्रसाद साह ले लिएको अन्तरर्बार्ताको सारसंक्षेप ः
कलैयालाईभ.काम कामको शिलशिलामा अन्य जिल्ला पुग्दाको र बारा जिल्लामा बस्दाको के भिन्ता पाउँनुभयो ?
बोहरा : अहिले तराई मधेसका जिल्ला चलाउँन चाईलेन्ज छ । किन भने राजनीतिक दलसंगै नेताहरु पनि बढेका छन् । हामीले कानुनको पालना गर्दै कानुनको पालना गर्न लगाउँने कार्य अन्य जिल्ला भन्दा बारामा जोखिम अवश्य रहेको छ । खुल्ला सिमाक्षेत्र तथा जनघनत्वको कारण समस्या अवश्य रहेको छ । तै पनि कानुनको कार्यन्वयनमा हामी लागेका छौ ।
कलैयालाईभ.काम बाराको शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
बोहरा : बारा जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने बिषयमा मैले भन्नु भन्दा पनि यहाँका जनताले त्यो भन्ने कुरा हो । बाराको शान्ति सुरक्षामा मैले यो गरे त्यो गरे भन्नु भन्दा पनि यहाँका नागरिकले त्यो कुरा महशुस गर्ने कुरा हो । बारा जिल्लाको शान्ति सुरक्षा मा पहिलेको र अहिलेकोमा के फरक छर अहिलेकोमा के फरक छ सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । सारमा भन्नु पर्दा हामी अहोरात खटेर बाराली जनताको सुरक्षाको लागि लागिपरेका छौ ।
कलैयालाईभ.काम : राती ८ बजे नै कलैयाको बजार बन्द गर्नुपर्ने कारण के होला ?
बोहरा : हामी बजार होईन ८ बजे पछि भट्टी पसल मात्र बन्द गर्ने गरेका छौ । अन्य पसलहरु खुलेकै छ । भट्टीमा रक्सी खाएर मातिने कामले मातिने जडयाहाका साथै अन्यलाई समेत समस्या पर्ने भएकोले यसमा हामीले अगाडी नै सचेत भएका हौ । यसमा निगरानी बढाएका छौ । कुनै अप्रिय घटना हुनुभन्दा अगाडी नै सचेत रहन यस्तो कदम चालेका हौ ।
कलैयालाईभ.काम ः नेपाली सिमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरु भारतीय प्रहरी तथा बासिन्दाबाट पीडित भएका छन् यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?
बोहरा ः यो समस्या बारा जिल्लाको मात्र नभएर राज्यको नै हो । त्यसैले यस बिषयमा केन्द्रले ठोस काम गर्नुपर्ने हुन्छ । र सिमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुको लागि केन्द्रले काम गरिरहेको छ यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै लग्ने छ । यस्ता कार्यको बारेमा केन्द्रले ठोस पहल गरेर यस्ता बिषयको समाधान गर्न जरुरी रहेको छ ।
कलैयालाईभ.काम ः तस्करी कार्य अझै नरोकिनुको कारण के होला ?
बोहरा ः पारीपट्टी रमेश खरेल छ । यहाँ म छु । यता सानातिना काम जस्तै मल ल्याउँने काम भएको छ । तर पहिले भन्दा धेरै सुधार भएको छ । कुनै प्रहरी यस्तो कार्यमा संलग्न छैनन् । यदी त्यस्तो कार्यमा फेला परे म कारवाही गर्छु । पहिला पहिला प्रहरी प्रंमुख सरुवा मागेर तराई मधेसमा आउँने गर्थे तर म त्यस्तो सरुवा मागेर पैसा कमाउँनको लागि आएको होईन् ।
कलैयालाईभ.काम ः अचेल प्रहरी नै चोरीका मोटरसाईकल सेतो प्लेट लगाएर चढिरहेको जनगुनासो छ नि ?
बोहरा ः यस्तो कार्य पहिला पहिला थियो होला । अहिले छैन । प्रहरी यस्तो कार्यमा छैनन् । चोरीको गाडी चढने प्रहरी होस वा भारतीय तथा नेपाली सबैलाई कारवाही भएको छ । हामी कसैको पनि सिफारीस नसुनि कानुन मिच्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउँछौ ।
कलैयालाईभ.काम ः कलैयाको ट्राफिक व्यवस्था सुधार्न किन नसकिएको होला ?
बोहरा ः म कलैया आउँदा बिहारको मोतिहारी जस्तै थियो । जथाभावि हेलमेट नलागाई हिडने तथा भन्सार नतिरि भारतीय गाडी चढनेलाई कारवाही भईरहेको छ । भारतीय दुताबासकै गाडी भन्सार नतिरि यता चाउँदै गर्दा मैले पक्राउँ गरी भन्सार बुझाएको छु । यसका साथै यहाँको संस्कार पनि हो जुन सुध्रिनु पर्छ । नागरिक पनि सचेत हुनुपर्छ । कानुनको भित्र बस्नुपर्छ । कानुन उल्घंन गर्नेलाई कारवाही हुन्छ ।
कलैयालाईभ.काम ः बर्तमान सरकारको कार्यशैलि कस्तो रहेको छ ?
बोहरा ः म सरकारको एक कर्मचारी भएको नाताले यस बिषयमा केही बोल्न मिल्दैन् ।
कलैयालाईभ.काम ः तपाई यस पत्रिका मार्फत बाराबासी तथा आम पाठकलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
बोहरा ः म यस पत्रिका मार्फत शान्ति सुरक्षा कसरी कायम गर्न सकिन्छ त्यसको लागि सबैले मिलेर काम गरौं । प्रहरी एकलैले केही गर्न नसकिने भएकोले शान्ति सुरक्षा कायम राख्नको लागि बाराबासी, नागरिक समाज, बुद्धिजिवि, पत्रकार लगायत सबैले यस कार्यमा सहयोगीको रुपमा लाग्न जरुरी रहेको छ । धन्याबाद ।।।
झापामा पत्रकार पौडेलको हत्या
श्रीमानद्धारा धारीलो हत्यार प्रयोग गरी श्रीमतिको हत्या
बिहेको खर्च जुटाउन भन्दै बेहुलाले बैंक लुटे https://t.co/Sa89hdKxlj
नेपाल र चीनबीच २० समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर https://t.co/U99OhAGXx9 https://t.co/pdAo0W2tEI
मेनरोड २५-२५ मिटर सडक फराकिलो पार्नु पार्ने भन्दै वीरगंजका युवाद्वारा हस्ताक्षर अभियान https://t.co/W6I5rjGRsb https://t.co/WIHjiPpJAD